दक्षिण एसियामा धेरै कर लाग्ने मुलुक नेपाल ! यसो भन्छन डा. महत
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ-
घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउने, ५ वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्ने, कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने र १० वर्षमा मध्यम आय भएका मुलुकमा पुग्ने ’हाइ साउन्डिङ’ घोषणाहरु भएका थिए। तर बजेट बनाउँदा सिमितता भित्र बस्नुपर्छ। चुनावको घोषणापत्र बनाउन जति सजिलो छ बजेट बनाउन त्यति सजिलो हुँदैन। कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
बजेटका प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न हुँदै होइन। तर प्रश्न कहाँ हो भने हाम्रो लक्ष्य एउटा छ बजेट अर्को तिर गएको छ। लक्ष्य र बजेटमा समावेशबीचका ’कन्सिस्टेन्सी’ छ कि छैन हेर्नुपर्छ। लक्ष्य प्राप्ती गर्न सकिने खालको छ कि छैन। यतातिर जानुपर्छ। बजेटमा समावेश भएका कुरा व्यवहारिक छ कि छैन यसकारण आलोचना भएको हो।
वृद्धिदर बढाउने हो भने दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा त लगानी रकम नै बढाउनु पर्छ। हाम्रो ’क्यापिटल आउटकम रेसियो’ अहिले ५.६स्१ अनुपात छ भन्ने सुनिन्छ। लगानी भएको पुँजीबाट उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पर्छ। बजेटको जोड त्यतातिर हुनुपर्थ्यो। सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनाहरुको लागत धेरै छ तर उत्पादन कम छ। त्यसलाई बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो सरकारले मात्रै लगानी बढाउन सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले कूल पुँजी लगानीमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आएको छ। बाँकी मात्रै सरकारी लगानी हो।
संसारमा चार वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर भएको कहीँ पनि छैन। हरित क्रान्ति भएको मुलुकमा पनि यस्तो भएको छैन। कृषिको वृद्धि असाध्यै सुस्त हुन्छ। अर्थतन्त्र आधुनिक बन्दै जाँदा कृषि प्रतिको निर्भरता बढ्दै जाँदा। बजेटमा ’हाइफाइ’ लक्ष्य छ तर कार्यान्वयनको संभावना छैन। बजेट सानो छ भनेर भनेको पनि सुनियो। यो बजेट सानो होइन।
हामीले २ वर्षअघि नै बुढीगण्डकी नै सुरु गर्नु पर्ने थियो। त्यसमा पेट्रोलिमय पूर्वाधार कर लगाएर १७र१८ अर्ब उठिसकेको छ। त्यतिबेला मैले इलेक्ट्रोमेकानिकल ऋणबाट र सिभिलको काम आफैं गरौँ भनेको थिएँ। हिन्दुस्तानको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने कुरा भएको थियो। बामदेवजी (तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम)ले हिन्दुस्तानसँग नगरौँ भन्नुभयो। चीनलाई दिने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको रहेछ। मलाई त्यो थाहा भएन।
मैले १२र१३ वर्षअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु गरेको थिएँ। पछि रोकिएछ। अहिले त्यो कुरा आएको छ। जुन सकारात्मक हो। संसारमा धेरै कमाउनेलाई सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न लगाउने चलन छ। सरकारले यहाँ पनि त्यो काम गराउन सक्छ। गरिबीको रेखामुनी भएकालाई सुरक्षणका लागि यो काम गर्न सकिन्छ।